Weerar Lagu Dilay Askar Kenyaati Ah Oo Ka Dhacay Jaziirada Lamu. – Bogga Calamada.com
Weerar Lagu Dilay Askar Kenyaati Ah Oo Ka Dhacay Jaziirada Lamu.
January 31, 2016 4:05 pm Views: 31
Ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha Kenya ayaa weerar lagu hoobtay ka fuliyey deegaan hoosyimaada magaalada Pandanguo oo ka tirsan Jaziirada Lamu, Iyadoona sidoo kale mujaahidiintu ay burburiyeen dhismayaal iyo xaafado ay daganaayeen dadka Nasaarada ah.
Weerarkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Kaisari oo ka tirsan Magaalada Pandanguo sida uu noo xaqiijiyey Taliska ciidanka Mujaahidiinta.
Afayeenka ciidanka mujaahidiinta Shaykh Cabdul Casiis Abuu Muscab ayaa idaacadda Andalus u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay xaley howlgal fariid ah ka fuliyeen deegaan ka tirsan Jaziirada Lamu, ayna halkaas ku dileen cadow aad u fara badan.
“Allaah fadligii ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xaley ahaa howlgal qorsheysan oo lagu laayey gaalada Kenya ka fuliyeen Jaziirada Lamu, Waxay halkaas ku dileen gaallo fara badan oo ka mid ahaa dadka ku nool deegaanka Kaisari oo hoostaga Pandanguo” ayuu yiri afayeenka ciidanka.
Shaykh Abu Muscab ayaa sidoo kale noo sheegay in mujaahidiinta ay kala sooceen muslimiinta iyo gaalada ka hor inta aysan xasuuqin gaalada.
Dhanka kale, Saraakiil u hadashay Police-ka Kenya ayaa dhankooda xaqiijiyey weerarkan, waxayna sheegeen in halkaas lagu gubay dhismayaal fara badan, sidoo kalena lagu dilay dad badan oo Nasaaro ah.
Sarkaal la hadlay wargeyska daily Nation ayaa sheegay in uu arkay ilaa saddex ruux oo midkood la gowracay, iyo dhismayaal ay dab qabadsiiyeen ciidamada Mujaahidiinta. Sarkaalkaas ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan dad dhaawacyo ah oo cagahooda kaga soo bad-baaday weerarka.
Deegaanka Pandangua oo dhaca gudaha fog ee Jaziirada Lamu ayaa dhowrjeer la kulmay weeraro noocan oo kale ah oo mujaahidiintu ay ku laayeen gaalada Kenya, Waxaana xusid mudan in uu ka mid ahaa deegaano mujaahidiintu ay ka fuliyeen silsilado weeraro ah sanadkii 2014-kii.